Lentinan (လန်တီနင်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဖက်ဝင် » Lentinan (လန်တီနင်)
Lentinan (လန်တီနင်) ကဘာလဲ။
လန်တီနင် ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Lentinanဆိုတာ ရှီတကီမှိုကနေရတဲ့ 1,3 beta glucan လို့ခေါ်တဲ့သကြားတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။
ခုခံအားကောင်းစေရန် တို့အတွက် အသုံးပြုကြပါတယ်။
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကတော့ ကင်ဆာနှင့်ကူးစက်ရောဂါများတွင် ပေးသောဆေးများ၏အာနိသင်ကို ပိုမိုကောင်းစေရန် lentinan ကိုအသုံးပြုကြပါသည်။ အခြားအသုံးပြုသည်များလည်း ရှိနိုင်ပါသေးသည်။ ဒီထက်ပိုပြီးသိရဖို့အတွက် သင့်ဆရာဝန် သို့ ဆေးဝါးပညာရှင်ကိုမေးမြန်းသင့်ပါတယ်။
ဒီဆေးဘက်ဝင်အပင်ထွက်ဖြည့်စွက်စာဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာသိရဖို့ စမ်းသပ်မှုတွေလုံလုံလောက်လောက်မလုပ်ရသေးပါဘူး။ ဒီထက်ပိုပြီးသိရဖို့အတွက်သင့်ဆရာဝန် သို့ ဆေးဝါးပညာရှင်ကိုမေးမြန်းသင့်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း အချို့လေ့လာချက်တွေအရတော့ အောက်ပါရောဂါများတွင် အသုံးပြုကြပါတယ်။
များစွာသောစမ်းသပ်မှုတွေမှာတော့ lentinan ကို ကင်ဆာဓါတုကုထုံးနှင့် အတူပေးခြင်းဟာ အစာအိမ်၊ ဆီးကျိတ်၊အူသိမ်နဲ့ အသည်းကင်ဆာတွေမှာ လူနာကိုပိုပြီး အသက်ရှည်စေကြောင်း တွေ့ရှိရပါတယ်။ ဓါတ်ခွဲခန်းလေ့လာမှုများတွင်တော့ lentinan ဟာ ကင်ဆာဆဲလ်တွေကို တိုက်ရိုက်သတ်ပေးတာမဟုတ်ပါဘူး။ အဲ့ဒီအစား သူဟာခုခံအားစနစ်ကို ကောင်းစေပြီး အကျိတ်တွေရဲ့ကြီးထွားမှုကို နှောင့်နှေးစေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဓါတ်ခွဲခန်းတွင်လေ့လာစမ်းသပ်မှုတွေကတော့ ဒီလိုအသုံးပြုမှုကိုထောက်ခံကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လောက်အာနိသင်ထိရောက်လဲဆိုတဲ့ အချက်ကတော့ အထောက်အထားကင်းမဲ့ဆဲဖြစ်သည်။
ဓါတ်ခွဲခန်းနှင့်လူများတွင်လေ့လာစမ်းသပ်မှုများအရ lentinan သည် ခုခံအားကောင်းစေတဲ့ဆဲလ်တွေရဲ့ ဆောင်ရွက်မှုတွေကို ပိုမိုအားကောင်းစေပါတယ်။
ဓါတ်ခွဲခန်းလေ့လာမှုများအရ lentinan သည် ဘက်တီးရီးယားတွေ၊ ဗိုင်းရပ်စ်တွေကို တိုက်ရိုက်သတ်နိုင်ပါတယ်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက ဆရာဝန် (သို့) ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
လန်တီနင် အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
အကယ်၍သင်ဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ် သို့ နို့တိုက်နေစဉ်ကာလဖြစ်လျှင် ဆေးတွေကိုဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်ရမှသာ သောက်သုံးသင့်ပါတယ်။
အကယ်၍သင်သည် အခြားဆေးဝါးများကိုမှီဝဲနေလျှင် (အခြားဆေးဝါးများဆိုရာတွင် ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါပဲ အပြင်မှာ ဝယ်သောက်နေသောဆေးများလည်း ပါဝင်ပါတယ်။)
သင့်တွင်ဖျားနာခြင်း ၊ရောဂါဝေဒနာများနှင့် အခြားကျန်းမာရေးပြဿနာများရှိနေလျှင် ၊
သင့်တွင် အစားအစာများ ၊ ဆိုးဆေးများ နှင့် တိရိစ္ဆာန်များနှင့်ဓါတ်မတည့်ခြင်းရှိလျှင်
ဆေးဘက်ဝင်အပင်ထွက်ဖြည့်စွက်စာများအတွက် လိုက်နာရသော စည်းကမ်းသည် ဓါတုဆေးဝါးများလောက် တင်းကြပ်ခြင်း မရှိပါ။ သို့သော် ဘေးကင်းစိတ်ချရမှု အတွက်တော့ လေ့လာစမ်းသပ်မှုတွေ လိုပါသေးတယ်။ lentinan အသုံးပြုခြင်းဖြင့်ရတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများဟာ ဖြစ်လာနိုင်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးထက် ပိုများဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အသေးစိတ်သိရဖို့ ဆရာဝန် သို့ အပင်ပညာရှင်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
လန်တီနင် က ဘယ်လောက်စိတ်ချရလဲ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့်နို့တိုက်နေစဉ်မှာ lentinan သုံးစွဲခြင်းဟာ စိတ်ချရမှုရှိမရှိကို လုံလောက်သော လေ့လာထားမှုမရှိသေးပါ။ ဒါကြောင့်မို့ အသုံးမပြုတာအကောင်းဆုံးပါ။
လန်တီနင် ကနေ ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမျိုးတွေကို ခံစားရနိုင်မလဲ
Lentinan သုံးစွဲမှုဟာ စိတ်ချရမှု ရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်ပြီး လုံလောက်သော အချက်အလက်များ မရှိပါ။ Lentinan ဟာ အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ နာကျင်ခြင်း ၊ အနီကွက်များထွက်ခြင်း ၊ကြွက်သားများနာကျင်ခြင်း၊ မောပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းနဲ့ သွေးခဲတာကိုကြာစေခြင်းတို့ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ လူတိုင်းတော့ဒီလိုဆိုးကျိုးတွေကိုမခံစားရပါဘူး။ အထက်ဖော်ပြပါ စာရင်းထဲမှာမပါတဲ့ဆိုးကျိုးတွေလည်းရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ ဆိုးကျိုးတွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ထပ်သိချင်သေးရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့မေးမြန်းတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
လန်တီနင် ကိုအသုံးပြုခြင်းကနေ ဘယ်လိုဓါတ်ပြုမှုတွေရှိလာနိုင်သလဲ
ဆေးဘက်ဝင်အပင် ဖြည့်စွက်စာတွေဟာ ဆေးတွေနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မသုံးစွဲခင် ဆရာဝန်နဲ့ အရင်တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် lentinan ဟာ Zidovudine (AZT) လိုဆေးတွေရဲ့ အာနိသင်တွေကိုပိုတိုးစေပါတယ်။
လန်တီနင် အတွက် ပုံမှန်သောက်သုံးရန်အညွှန်းက ဘယ်လောက်လဲ
Lentinan ကို HIV၊ AIDS လူနာတွေမှာ ခုခံအားကောင်းစေဖို့ပေးကြပါတယ်။
ဒီဆေးဝါးရဲ့သုံးစွဲရမည့်ပမာဏဟာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မတူနိုင်ပါဘူး။ သင့်ရဲ့အသက်၊ကျန်းမာရေးနဲ့အခြားအခြေအနေတွေအပေါ်မူတည်ပြီး ပမာဏဟာ ကွာခြားသွားကြပါတယ်။ အပင်ထွက်ဖြည့်စွက်စာတွေဟာလည်း အမြဲစိတ်မချရပါဘူး။ ဒါကြောင့် သင့်အတွက်သင့်တော်မယ့် ဆေးပမာဏအတွက်ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ရပါမယ်။
လန်တီနင် က ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့လာလဲ
အပင်ထွက်ဖြည့်စွက်စာကို ဆေးတောင့် နဲ့ ထိုးဆေးဟူ၍ ပုံစံနှစ်မျိုးဖြင့်ရနိုင်ပါတယ်။
Hello health group သည် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအကြံပေးခြင်း၊ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့် ကုသခြင်းတို့ကို မပြုလုပ်ပေးပါ။
Phyo Wai Yan
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဩဂုတ် 8, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဩဂုတ် 11, 2017
Lentinan. http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono-763-Lentinan.aspx?activeingredientid=763&activeingredientname=Lentinan. Accessed 14 December, 2016.
Lentinan. https://www.mskcc.org/cancer-care/integrative-medicine/herbs/Lentinan. Accessed 14 December, 2016.
ဆေးတစ်ခုခုသောက်မယ်ကြံတိုင်း နို့တိုက်နေရလို့ဆိုပြီး စိုးရိမ်နေတဲ့ မေမေတို့အတွက်
အမှည့်မဟုတ်ဘဲ သရက်သီး အစိမ်းချဉ်ချဉ်လေးမှ ကြိုက်တဲ့သူတွေရှိလား ။ ။
နို့နှင့်နို့ထွက်ထုတ်ကုန်များ မသောက်သုံးမီ သိထားသင့်သည့် အချက်များ